အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာက အရည်အချင်းရှိရုံ တစ်ခုတည်းနဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
အရည်အချင်းရှိပေမယ့် ကိုယ့်ဘ၀ကို အဆုံးရှုံးခံခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားများ
5 Oct 2018 . 3:17 PM
အောင်မြင်တဲ့ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက လွယ်ကူတဲ့ ခရီးလမ်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ အရည်အချင်းရှိရမယ်၊ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားဖို့ ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ ဇွဲ၊ လုံလ။ ဒါတင်မကသေးဘူး အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာခဲ့ရင် ကျေနပ်ယစ်မူး မသွားဖို့ပါပဲ။ ဘောလုံးလောကမှာ အရည်အချင်းရှိရဲ့သားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒီထဲကမှ ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးပြီးသား ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
အက်ဒရီယာနို Adriano (ဘရာဇီးလ်)
တစ်ချိန်က နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်နဲ့ အင်တာမီလန် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အက်ဒရီယာနိုရဲ့ ဘောလုံးသမားဘ၀ အဆုံးသတ်က စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစရာပါ။ ခြေစွမ်းလည်းကောင်း၊ အရည်အချင်းလည်း ရှိပါရက်နဲ့ အရက်နွံထဲမှာ ကိုယ့်ဘ၀ကို နစ်မွန်းခံခဲ့တယ်။ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်မှာကတည်းက ဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှာ တောက်ကြွားလာခဲ့တဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်တစ်ဦး။ ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ရော်နယ်လ်ဒို Ronaldo ရဲ့ ခြေရာနင်းမယ့်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူ။ ရွှေရောင်တောက်ပနေတဲ့ အနာဂတ်က သူ့အတွက် စောင့်ကြိုနေပေမယ့် အက်ဒရီယာနိုရဲ့ ဘ၀အချိုးအကွေ့က မြန်ဆန်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ သူ့ဘ၀ရဲ့ ပဲ့ကိုင် ဖခင်ဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားကတည်းက အရက်ရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေဟာ အက်ဒရီယာနိုအတွက် ငရဲပါပဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပရိသတ်တွေ သိတဲ့အတိုင်း လူမသိသူမသိဘ၀နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
တာရက်ဘ် Adel Taarabt (မော်ရိုကို)
”တာရက်ဘ်ဟာ ဒီကာနီယို Di Canio လို ထိပ်တန်းအဆင့် အရည်အသွေးရှိတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ သူ ကျွန်တော်တို့အသင်းကို စရောက်လာတုန်းက ‘ဇီဒန်း Zidane’ လက်သစ်လို့တောင် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်”။ ဒီစကားတွေက ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ စပါးအသင်းကို တာရက်ဘ် စရောက်ခဲ့တုန်းက နည်းပြရက်နက်ပ် Redknapp ပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောသလိုပဲ တာရက်ဘ်ဟာ မော်ရိုကိုဘောလုံးလောကကို ကမ္ဘာ့ဘောလုံးစင်မြင့်မှာ ပြန်လည်ဦးမော့လာအောင် ဦးဆောင်ပေးနိုင်မယ့်သူအဖြစ် မီဒီယာတွေက သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ Dribbling Skill ၊ Finishing Skill ဘာမှ ပြောစရာမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ”ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖျက် သံချေးတက်”ဆိုသလိုပဲ တာရက်ပ်က အရည်အသွေးရှိပေမယ့် ကြိုးစားချင်စိတ် မရှိတာက ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်။ အနေအထိုင် အစားအသောက်က အစ ဆင်ခြင်မှုမရှိ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း မဆင်းချင်ဆိုတော့ သူဟာ အောင်မြင်တဲ့ ဘောလုံးသမားဖြစ်ဖို့ ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက် မရှိဘူးလို့ပဲ ဆိုရမယ်။ အခုတော့ တာရက်ဘ်ဟာ စီးရီးအေကလပ် ဂျီနိုအာအသင်းမှာ မထင်မရှား ကျင်လည်နေရပါပြီ။
ကာဆာနို Antonio Cassano (အီတလီ)
ဆယ်ကျော်သက် ကစားသမားဘ၀ကတည်းက တစ်ချိန်ကျရင် အီတလီဘောလုံးလောကအတွက် အားထားရမယ့် ကစားသမားလို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပေမယ့် ကာဆာနိုက ပရိသတ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ရေစုန်မျောပစ်ခဲ့တယ်။ ထိပ်တန်းအဆင့် ခြေစွမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် ရမ်းကားချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်က သူ့ဘ၀တက်လမ်းအတွက် အကြီးမားဆုံး အဟန့်အတားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပြင်ပလူနေမှုဘ၀မှာလည်း စိတ်ထင်တိုင်းကြဲခဲ့တဲ့ ကာဆာနို အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေ သက်ဆင်းခဲ့ရတာ သိပ်တော့ မဆန်းပါဘူး။
လူတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာက အရည်အချင်းရှိရုံ တစ်ခုတည်းနဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီ ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ ခြေစွမ်းက Top Class မှာရှိပေမယ့် ကြိုးစားလိုစိတ်၊ အောင်မြင်လိုစိတ် မရှိတော့ ရောက်သင့်တဲ့အဆင့်ကို မရောက်ခဲ့တာပါပဲ။ တက်သစ်စ လူငယ်ဘောလုံးသမားလေးတွေအနေနဲ့ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ သူတွေလို မဖြစ်အောင် နမူနာယူပြီး ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ကြိုးစားသွားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် . . .
အရညျအခငျြးရှိပမေယျ့ ကိုယျ့ဘဝကို အဆုံးရှုံးခံခဲ့တဲ့ နာမညျကြျော ဘောလုံးသမားမြား
အောငျမွငျတဲ့ ဘောလုံးသမားတဈယောကျဖွဈဖို့ဆိုတာက လှယျကူတဲ့ ခရီးလမျးတော့ မဟုတျဘူး။ အရညျအခငျြးရှိရမယျ၊ အောငျမွငျမှု ပနျးတိုငျကို အရောကျသှားဖို့ ခိုငျမာတဲ့ ယုံကွညျခကျြ၊ ဇှဲ၊ လုံလ။ ဒါတငျမကသေးဘူး အောငျမွငျမှု လမျးကွောငျးပျေါ ရောကျလာခဲ့ရငျ ကနြေပျယဈမူး မသှားဖို့ပါပဲ။ ဘောလုံးလောကမှာ အရညျအခငျြးရှိရဲ့သားနဲ့ ကိုယျ့ဘဝကိုယျ ဖကျြဆီးခဲ့တဲ့ နာမညျကြျောဘောလုံးသမားတှေ အမြားကွီးပါ။ အဲဒီထဲကမှ ပရိသတျတှေ ရငျးနှီးပွီးသား ကစားသမားတှကေို ရှေးခယျြဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
အကျဒရီယာနို Adriano (ဘရာဇီးလျ)
တဈခြိနျက နာမညျကြျောခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျနဲ့ အငျတာမီလနျ တိုကျစဈမှူးဟောငျး အကျဒရီယာနိုရဲ့ ဘောလုံးသမားဘ၀ အဆုံးသတျက စိတျပကျြဝမျးနညျးစရာပါ။ ခွစှေမျးလညျးကောငျး၊ အရညျအခငျြးလညျး ရှိပါရကျနဲ့ အရကျနှံထဲမှာ ကိုယျ့ဘဝကို နဈမှနျးခံခဲ့တယျ။ အသကျ(၁၈)နှဈအရှယျမှာကတညျးက ဘောလုံးစငျမွငျ့ထကျမှာ တောကျကွှားလာခဲ့တဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့တဈဦး။ ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ ရျောနယျလျဒို Ronaldo ရဲ့ ခွရောနငျးမယျ့သူအဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရသူ။ ရှရေောငျတောကျပနတေဲ့ အနာဂတျက သူ့အတှကျ စောငျ့ကွိုနပေမေယျ့ အကျဒရီယာနိုရဲ့ ဘဝအခြိုးအကှကေ့ မွနျဆနျခဲ့တယျ။ ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ သူ့ဘဝရဲ့ ပဲ့ကိုငျ ဖခငျဖွဈသူ ဆုံးပါးသှားကတညျးက အရကျရဲ့ကြေးကြှနျဖွဈခဲ့ပွီး အဲဒီနောကျပိုငျးနှဈတှဟော အကျဒရီယာနိုအတှကျ ငရဲပါပဲ။ နောကျဆုံးမှာတော့ ပရိသတျတှေ သိတဲ့အတိုငျး လူမသိသူမသိဘဝနဲ့ အဆုံးသတျခဲ့ရပါတော့တယျ။
တာရကျဘျ Adel Taarabt (မျောရိုကို)
”တာရကျဘျဟာ ဒီကာနီယို Di Canio လို ထိပျတနျးအဆငျ့ အရညျအသှေးရှိတဲ့ ကစားသမားတဈဦးပါ။ သူ ကြှနျတျောတို့အသငျးကို စရောကျလာတုနျးက ‘ဇီဒနျး Zidane’ လကျသဈလို့တောငျ သတျမှတျခဲ့ကွပါတယျ”။ ဒီစကားတှကေ ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာ စပါးအသငျးကို တာရကျဘျ စရောကျခဲ့တုနျးက နညျးပွရကျနကျပျ Redknapp ပွောဆိုခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ သူပွောသလိုပဲ တာရကျဘျဟာ မျောရိုကိုဘောလုံးလောကကို ကမ်ဘာ့ဘောလုံးစငျမွငျ့မှာ ပွနျလညျဦးမော့လာအောငျ ဦးဆောငျပေးနိုငျမယျ့သူအဖွဈ မီဒီယာတှကေ သတျမှတျခဲ့ကွတယျ။ Dribbling Skill ၊ Finishing Skill ဘာမှ ပွောစရာမရှိဘူး။ ဒါပမေဲ့ ”ကိုယျ့ကိုယျကိုယျဖကျြ သံခြေးတကျ”ဆိုသလိုပဲ တာရကျပျက အရညျအသှေးရှိပမေယျ့ ကွိုးစားခငျြစိတျ မရှိတာက ပွဿနာဖွဈခဲ့တယျ။ အနအေထိုငျ အစားအသောကျက အစ ဆငျခွငျမှုမရှိ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလညျး မဆငျးခငျြဆိုတော့ သူဟာ အောငျမွငျတဲ့ ဘောလုံးသမားဖွဈဖို့ ခိုငျမာတဲ့ယုံကွညျခကျြ မရှိဘူးလို့ပဲ ဆိုရမယျ။ အခုတော့ တာရကျဘျဟာ စီးရီးအကေလပျ ဂြီနိုအာအသငျးမှာ မထငျမရှား ကငျြလညျနရေပါပွီ။
ကာဆာနို Antonio Cassano (အီတလီ)
ဆယျကြျောသကျ ကစားသမားဘဝကတညျးက တဈခြိနျကရြငျ အီတလီဘောလုံးလောကအတှကျ အားထားရမယျ့ ကစားသမားလို့ သတျမှတျခံခဲ့ရပမေယျ့ ကာဆာနိုက ပရိသတျတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြကို ရစေုနျမြောပဈခဲ့တယျ။ ထိပျတနျးအဆငျ့ ခွစှေမျးကို ပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့ ရမျးကားခငျြတဲ့ စိတျဓာတျက သူ့ဘဝတကျလမျးအတှကျ အကွီးမားဆုံး အဟနျ့အတားဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ပွငျပလူနမှေုဘဝမှာလညျး စိတျထငျတိုငျးကွဲခဲ့တဲ့ ကာဆာနို အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးပျေါကနေ သကျဆငျးခဲ့ရတာ သိပျတော့ မဆနျးပါဘူး။
လူတဈယောကျ အောငျမွငျဖို့ဆိုတာက အရညျအခငျြးရှိရုံ တဈခုတညျးနဲ့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒီ ဘောလုံးသမားတှရေဲ့ ခွစှေမျးက Top Class မှာရှိပမေယျ့ ကွိုးစားလိုစိတျ၊ အောငျမွငျလိုစိတျ မရှိတော့ ရောကျသငျ့တဲ့အဆငျ့ကို မရောကျခဲ့တာပါပဲ။ တကျသဈစ လူငယျဘောလုံးသမားလေးတှအေနနေဲ့ အခုဖျောပွခဲ့တဲ့ သူတှလေို မဖွဈအောငျ နမူနာယူပွီး ကိုယျ့ရညျမှနျးခကျြ ပနျးတိုငျရောကျအောငျ ကွိုးစားသှားရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ . . .